Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndi akuko » Pegasus na-ebupụta ụgbọ elu London na Helsinki ọhụrụ kpọmkwem
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Finland na -agbasa ozi ọma • News • Ndi akuko • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Turkey dijitalụ ụgbọ elu Pegasus na-aga n'ihu ịgbasa netwọk ya na mwepụta nke ụzọ ọhụrụ atọ maka 2020. Ndị njem UK na-esi London Stansted ga-enwe ike fega kpọmkwem na isi obodo Turkey nke Ankara na ụgbọ elu na-ebido na 29 Machị 2020, yana Antalya, otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kachasị ewu ewu na Turkey na Mediterranean, dịka nke 8 June 2020.
Na-ebuputa Helsinki site na Istanbul Sabiha Gokcen na 9 June 2020, uzo mbu ya na Finland, Pegasus na-agbatị netwọkụ nke ebe ọ ga - aga mba 43 ma na - abawanye ọnụnọ ya na Northern Europe yana ụgbọ elu na Helsinki na mgbakwunye Copenhagen, Oslo na Stockholm.
PEGASUS na-agbakwunye ụzọ ụzọ ọhụụ abụọ si UK
Flightsgbọ elu ụgbọ elu na-aga Ankara Esenboga International Airport ga-apụ site na ọdụ ụgbọ elu Stansted na Tuesday, Thursday na Saturday na 20:40, na-erute na 02:25. Flightslaghachi ụgbọ elu ga-esi Ankara pụọ ​​na 04: 05 na Wednesde, Fraịde na Sọnde wee rute na London Stansted na 06:20.
Pegasus 'ụgbọ elu ụgbọ elu dị n'etiti London Stansted na ọdụ ụgbọ elu mba Antalya ga-apụ na Mọnde na Tọzdee ma ụzọ abụọ. Gbọ elu ga-apụ na London Stansted na 10:00, wee rute na 16:05 na Antalya. Laghachi ụgbọ elu si Antalya ga-apụ na 06:35, na-eru London Stansted na 09:00.
Uzo abuo ohuru a na-akwụ ụgwọ nke Turkish site na ọdụ ụgbọ elu London Stansted na mgbakwunye na ọrụ Pegasus ugbu a, ihe ruru ugboro ise kwa ụbọchị, dị site na London Stansted ruo Istanbul Sabiha Gökçen na ugboro ise kwa izu ụgbọ elu na-aga ọdụ ụgbọ elu Izmir Adnan Menderes. Jikọọ na Istanbul site na ebe ndị ọzọ dịka Antalya na Bodrum na Turkey na Dubai, Abu Dhabi, Beirut, Tehran, Tbilisi na Tel Aviv dị ka ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ama ama mba ụwa dị na London. Na 1st Julaị 2019, Pegasus bidoro usoro ụgbọ elu ha ga-eme kwa ụbọchị n'etiti ọdụ ụgbọ elu Manchester, bụ ebe nke abụọ ya na UK mgbe London Stansted, na Istanbul nwere ọtụtụ njikọ aga n'ihu.
NEW HELSINKI OUZỌ
Ọgụ si Istanbul Sabiha Gökçen ọdụ ụgbọ elu na Helsinki ga-apụ ugboro anọ kwa izu na Wednesde, Tọzdee, Satọde na Sọnde ma ụzọ abụọ ma adịlarị ịde akwụkwọ ugbu a.